Izitatimende zokubheka phambili - Sorrento Therapeutics
Izitatimende ezibheke phambili
Ulwazi oluhlinzekwe kule webhusayithi luhlanganisa ulwazi olubheke phambili kanye nezitatimende ezibheke phambili (sekukonke, “izitatimende ezibheke phambili” ngaphakathi kwencazelo yemithetho yezibambiso esebenzayo, okuhlanganisa phakathi kwencazelo yezinhlinzeko “zechweba eliphephile” ze-US Private Securities Litigation. UMthetho Wezinguquko ka-1995) ohlobene Sorrento Therapeutics, Inc. ("I-Sorrento"). Izitatimende ezibheke phambili zibonisa lokho abaphathi be-Sorrento abakulindele nezinkolelo zabo mayelana nemicimbi yesikhathi esizayo futhi zingase futhi zibonise izinhlelo zabaphathi be-Sorrento, izinjongo, izinjongo nezinjongo. Lezi zitatimende ezibheke phambili azihlobani ngokuphelele namaqiniso omlando noma amanje futhi zingase zihambisane namagama anjengokuthi “inhloso,” “lindela,” “kholwa,” “nga,” “linganisa,” “lindela,” “isibikezelo, ” “nhloso,” “kungenzeka,” “ukuhlela,” “okungenzeka,” “kungenzeka,” “intando” namanye amagama namagama anencazelo efanayo. Lezi zitatimende zihlobene, phakathi kokunye, okulindelwe ngabaphathi be-Sorrento mayelana nezinhlelo, izinjongo, amasu, ukusebenza kwesikhathi esizayo noma ukusebenza kwezimali, izinhlelo zebhizinisi namathemba, kanye nokulindelwe mayelana nokuhlolwa kwemitholampilo, izikhathi zentuthuko, izingxoxo neziphathimandla ezilawulayo, izinhlelo zentuthuko, abantu abazongenela ukuthuthukiswa imithi yophenyo esathuthukiswa yi-Sorrento kanye nozakwethu besu be-Sorrento. Izitatimende ezibheke phambili kule webhusayithi azizona izithembiso noma iziqinisekiso, futhi akufanele ubeke ukwethembela ngokungafanele kulezi zitatimende ezibheke phambili ngoba zibandakanya izingozi ezaziwayo nezingaziwa, ukungaqiniseki nezinye izici, eziningi zazo ezingaphezu kwamandla e-Sorrento futhi ezingase zilawuleke. yenza imiphumela yangempela yehluke kakhulu kuleyo evezwe noma eshiwo yilezi zitatimende ezibheke phambili. Ubungozi obunjalo nokungaqiniseki kubandakanya, kodwa akupheleli lapho, umthelela wezimo zezomnotho ezijwayelekile, izimo zomnotho embonini ye-biopharmaceutical, izinguquko esimweni esilawulayo, ukuntengantenga kwezimakethe zamasheya, ukuguquguquka kwezindleko, ikhono lethu lokuthuthukisa nokuvikela impahla yethu yengqondo kanye nentuthuko. siqhuba ibhizinisi lethu ngaphandle kokwephula amalungelo empahla yengqondo yabanye, ukuthembela kubantu besithathu kanye/noma izivumelwano zokusebenzisana ukuze sithuthuke ngempumelelo kanye nokudayiswa kwemikhiqizo yethu, izinguquko esimweni sokuncintisana, izinguquko ezingeni lokunakekelwa kwezinkomba ezihlukahlukene lapho i-Sorrento iyabandakanyeka, nezinye izingozi ezishiwo embikweni wonyaka we-Sorrento weFomu 10-K, kanye nokunye ukugcwalisa okwalandela okwenziwa ngezikhathi ezithile ne-US Securities and Exchange Commission, etholakala ku- www.sec.gov. Lezi zingozi nokungaqiniseki kungabangela imiphumela yesikhathi esizayo, ukusebenza noma impumelelo ukuthi ihluke kakhulu emiphumeleni, ukusebenza noma izimpumelelo ezivezwe noma ezishiwo yilezo zitatimende ezibheke phambili. Leyo miphumela, ukusebenza noma impumelelo ihlanganisa, kodwa akugcini lapho, isikhathi sokubhalisa noma sokuqedwa kokuhlolwa komtholampilo, imiphumela yokuhlolwa komtholampilo, isikhathi kanye nemiphumela yesenzo sokulawula, impumelelo ehlobene noma ukuntuleka kwempumelelo ekuthuthukiseni nasekuzuzeni. ukugunyazwa okulawulwayo kwamakhandidethi womkhiqizo we-Sorrento, impumelelo, ukusebenza kahle noma ukuphepha kwanoma yibaphi abakhethiwe bomkhiqizo we-Sorrento, ikhono lokukhuphula, ukwakha kanye nokukhiqiza imikhuba emihle yokukhiqiza eyanele, amanani omtholampilo noma okuhweba amakhandidethi womkhiqizo we-Sorrento, kanye nempumelelo ehlobene noma ukuntuleka. yempumelelo ekwamukelweni kwemakethe kwanoma yimaphi amakhandidethi womkhiqizo we-Sorrento. Ukuthuthukiswa kwezidakamizwa nokudayiswa kuhilela izinga eliphezulu lobungozi, futhi inani elincane kuphela lezinhlelo zocwaningo nokuthuthukiswa okuholela ekuhwebeni komkhiqizo. Imiphumela esesigabeni sangaphambi kwesikhathi sokuhlolwa komtholampilo ingase ingabi yinkomba yemiphumela egcwele noma imiphumela evela kusigaba sakamuva noma uvivinyo lomtholampilo lwezinga elikhulu futhi ingaqinisekisi ukugunyazwa ngokomthetho.
Kule webhusayithi, abaphathi be-Sorrento bangase babhekisele emiphumeleni, ekuqageleni noma ezilinganisweni zokusebenza ezingalungiselelwanga ngokuvumelana ne-US Generally Accepted Accounting Principles (“GAAP”) njengoba kubikwe ekugcwaliseni kwe-SEC yenkampani. Le miphumela, ukuqagela noma izilinganiso zokusebenza kuyizilinganiso okungezona ze-GAAP futhi akuhloselwe ukufaka esikhundleni noma ukufaka esikhundleni semiphumela elinganiswa ngaphansi kwe-GAAP futhi kungezelelwa emiphumeleni ebikiwe ye-GAAP.
Lezi zitatimende ezibheke phambili zikhuluma kuphela kusukela ngosuku ezaqala ukwenziwa noma ezibuyekezwa ngalo kule webhusayithi, futhi i-Sorrento ngalokhu ichitha noma iyiphi inhloso, umsebenzi, isibopho noma isibopho sokubuyekeza noma ukubuyekeza izitatimende ezibheke phambili eziqukethwe kule webhusayithi.